Ingabe i-Halloween ikhanseliwe? Iqiniso Lokulahleka Kwama-All Hallows 'Eve (UPDATE) - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Ingabe i-Halloween ikhanseliwe? Iqiniso Lokulahleka Kwama-All Hallows 'Eve (UPDATE)
Ingabe i-Halloween ikhanseliwe? Iqiniso Lokulahleka Kwama-All Hallows 'Eve (UPDATE)
by I-Curt Fiers August 7, 2020
ebhalwe ngu I-Curt Fiers August 7, 2020
Kubuyekezwe ngo-Septhemba 9, 2020
Njengoba u-Okthoba 31 esondela eduze nosuku, umqondo weHalloween ukhanseliwe ngenxa yenoveli coronavirus iba yinto yangempela. Vele, abantu abaningi bayawulahla umbono wokuthi lokhu kungenzeka. Ngemuva kwalokho, leli holidi lisasele isikhathi esingaphezu kwenyanga. Njengoba amacala e-COVID-19 eqhubeka nokukhuphuka, noma kunjalo, kunezinkomba zokuthi iHalloween ingase imiswe.
I-Halloween Ithatha Isigqi
Ngabe sizobona abakhohlisi nabazulazula ezindaweni zobusuku ngobusuku be-Halloween? Kuthiwani ngezithombe ze-Facebook zama-vampiresses amnandi athatha isibhamu emaphathini? Leyo mpendulo isemoyeni. Lokhu cishe kuzoncika ebangeni legciwane ezindaweni ezithile lapho ubusuku obuhle kakhulu bonyaka ekugcineni bufika. Kodwa-ke, ngezindlela eziningi, i-Halloween ekhanseliwe yilo bhubhane isivele iyenzeka.
(Vuselela) Imibiko yezindaba ngoSepthemba 8 yathi iLos Angeles County idale imikhawulo eba yiHalloween ekhanseliwe. Ngeke kube khona ukukhohlisa, "iloli noma ukwelashwa," izindlu ezihehwa, imikhosi, ukuzijabulisa okubukhoma noma amaphathi avunyelwe.
Sibike emuva ngoJulayi ukuthi i-Universal Studios Hollywood yenza ukhetho olunzima luka ikhansela i-Halloween Horror Nights. Lo mcimbi udume kakhulu waze wakhulisa imali engenayo yepaki yengqikimba ngamaphesenti angama-30. Ngeshwa, lokhu bekungekho ukuphela kokushaya ukuthi i- okwangempela “isikhathi esihle kakhulu sonyaka ”kungathatha. IKnott's Scary Farm, iAnaheim's Disneyland Resort neThe Queen Mary liner yonke ikhansele nemicimbi yabo ye-Halloween.
Lezi bekungezona izinqumo ezenziwa ngabaphathi abaqaphe ngokweqile. Iqiniso lokuthi izehlakalo azenzeki lidweba isithombe sangempela se-Halloween esikhanseliwe ngaphambi kuka-Okthoba. Lapho iNdlovukazi uMariya ehlonishwa ngokomlando futhi ihlaselwa yaba yimizila esabisayo, ngokwesibonelo, ukukhanga kuletha ngaphezu kwezivakashi eziyi-140,000.
Ingxenye yemali engenayo yaminyaka yonke yeKnott's Berry Farm nayo ivela emcimbini wayo "Owesabekayo", futhi inkampani yabazali bayo isivele ilahlekile Izivakashi eziyizigidi eziyi-8. Lezi zinkampani bezingeke zivale amathuba amakhulu kangaka emali engenayo ngaphandle kokuthi ukwenza lokho kubalulekile.
Akunandaba ukuthi siyibuka kanjani, i-Halloween ekhanselwe i-coronavirus isivele iyinto ethile kwezinye izindlela. Le micimbi ithatha izinyanga ukuyilungiselela, ngakho-ke ngisho nokutholakala kokwelapha okuyisimangaliso ku-COVID-19 kungahle kunganele ukubuyisa ezinye zezinto esizithandayo ezibuya kwabafileyo.
I-Halloween ekhanseliwe ikhubazekile
Esinye sezimo ezesabekayo zeHalloween engase ikhanselwe akulona iqiniso lokuthi sizolahlekelwa ubusuku obubodwa benjabulo ngo-2020. Ngeshwa, unyaka ophansi komsele ungaba nemiphumela yesikhathi eside ehambisana neminyaka ezayo. UTom Arnold - uprofesa wezezimali e-University of Richmond's business - udwebe isithombe esibi kakhulu:
“[IHalloween] iholide eliza ngokwesibili ngemuva kukaKhisimusi ngokuya ngemali esetshenziswayo. Angicabangi ukuthi kungaba yiphutha ukuqagela ukuthi imali incishiswa phakathi, okungenani. ”
Ngeholide eliqongelelwe Kusetshenziswa u- $ 8.8 billion ngo-2019 phakathi kwabantu baseMelika, lokho ukulahlekelwa okukhulu. I-Dark Horizon e-Orlando naseFreakling Bros eLas Vegas nabo bavala iminyango yabo. ISt. Charles Haunted House eMichigan kanye nePittsford Haunted House eVermont nabo bajoyine ikhorasi yokukhanselwa kwe-Halloween.
Izinkampani noma imicimbi eqoqa ingxenye enkulu yemali engenayo evela kuleli holidi, lokhu kulahlekelwa kungabonakala kuyinhlekelele. Ngenkathi i-Universal noma i-Knott's Berry Farm ingakwazi ukusinda kuleso sikhathi, ama-haunts amancane angahle angabi nenhlanhla. Iningi lokuqoqa amaphesenti ayi-100 emali engenayo emavikini azungeze iholide elisabekayo. Lokhu kusho ukuthi bazokuthola kunzima ukululama ku-Halloween ekhanseliwe lapho beyidinga kakhulu.
Ngabe amaqembu noma ukukhohlisa noma ukwelashwa kukhanseliwe?
Abantu abaningi bangabhekana nomqondo weHalloween ngaphandle kwamapaki wezindikimba kanye nezindawo abazithandayo, kepha kuthiwani uma uhulumeni evimba ubuqili noma ikhono lokwenza amaqembu? Amabhizinisi nemigoqo sekuvele ukwamukela inhlawulo nokuvala ama-oda ngokwenqaba ukuthobela imiyalo ehlobene ne-COVID. Abantu nabo babhekene izinhlawulo eziyizinkulungwane zamadola okokubamba amaqembu ngesikhathi sobhadane.
Futhi kuthiwani ngabakhohlisi? Ngabe umsebenzi owanikeza iningi lethu izinkumbulo zethu zobuntwana obuthandekayo ungaba isisulu se-Halloween ukhanseliwe? Impendulo ithi "kuya ngokuthi." Ngenkathi kwakukubi ngokwanele lapho idolobha elilodwa uvimbele noma ngubani oneminyaka engaphezu kwengu-12 ekukhohliseni noma ekwelapheni ngo-2019, iqiniso ukuthi wonke umuntu kungadingeka ukuthi ngihlale ekhaya le-Halloween. Isitatimende esivela eSalem, iMisa. Nokho, sinikeza inhlansana yethemba:
“No-Okthoba noma i-Halloween ngeke ikhanselwe, kepha izobukeka yehlukile kulo nyaka njengoba siqhubeka ngenkathi yokwindla ngenkathi sibhekene nenkinga ye-coronavirus. Okwamanje, azikho izinhlelo zokukhansela noma zokuguqula ukuqhathwa komakhelwane emindenini. ”
Ngeshwa, lokhu kungaba ukucabanga okufisa ukwedlula noma yini enye. I-Halloween ngokuqinisekile izohlala ihlala ezinhliziyweni zethu, kepha noma ngabe omasipala bayawavumela amaqembu nokukhohlisa noma ukukhohlisa kungenzeka kuncike ezimisweni zombuso nezendawo. Eminye imiphakathi ingakuthola kuphephile ukuthi le micimbi yenzeke ngenxa yezinga eliphansi lokutheleleka. Noma iziphi izindawo lapho leli gciwane lingalawuleki, noma kunjalo, cishe kuzoba nemikhawulo ebucayi emisebenzini yabo ye-Halloween.
Njengamanje, ukubheja okuhle kakhulu kokugwema i-Halloween kukhanseliwe ukuthi wonke umuntu afake isifihla-buso futhi azijwayeze ukuqhela kwezenhlalo okufanele. UTom Savini udale imaski enhle kakhulu lokho kungakusiza ukuthi ubukeke upholile kulokhu, kepha imaski yakho yokugaya ingasebenza ekusizeni ukunciphisa ukudluliswa. Kukhona ithani labantu laphaya abazonda umqondo wokulandela le nkombandlela yezempilo yomphakathi, kepha okwamanje, kungaba ukuphela kwendlela yokulondoloza i-Halloween.
Kuthiwani uma i-Halloween ikhanseliwe?
Kwabaningi bethu, esingakwenza nje ukulinda. O, futhi gqoka izifihla-buso. Amathuba okuthi ukukhohlisa nokuphatha neminye imicimbi ye-Halloween izoqhubeka njengokujwayelekile, noma kunjalo? Kuyiphupho elishabalalayo ngokushesha. Imicimbi yethu eminingi esiyithandayo isivele ikhanseliwe, futhi ngaphandle kokuthi kwenzeke okuthile okukhulu ngaphambi kuka-Okthoba 31, ukuvinjelwa kwemihlangano emikhulu eningi laseMelika kungenzeka kusekhona.
Ukuze silethe injabulo encane empilweni yabalandeli be-iHorror, noma kunjalo, sisingatha umncintiswano wokuvunula nabalandeli bethu. Abaphumelele kulo mncintiswano bazokhipha iphakethe elikhulu lomklomelo we-Halloween. Sizothumela imithetho ephelele ngokuhamba kwesikhathi, kepha abangenayo bazodinga ukusebenzisa ilogo ye-iHorror kwenye indawo emfanekisweni wabo ukungena. Siphinde sinikeze eminye imincintiswano ye-Halloween kulabo bhalisa njengomsekeli we-iHorror.
I-Halloween ekhanseliwe ngenxa ye-COVID-19 kungenzeka ingagwemeka kuleli phuzu, kepha akukho ukuvinjelwa kokukhohlisa noma ukwelashwa kweqembu kungasusa weqiniso incazelo yobusuku. Isikhathi sethu sokuthi sikhanye, futhi noma ngabe kufanele sikwenze sisuka ekhaya, qiniseka ukuthi sizosebenza kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi u-2020 yiHalloween okufanele siyikhumbule! Sitshele izinhlelo zakho ze-All Hallows 'Eve emazwaneni!
ICoronavirusI-Covid-19HalloweenIHalloween ikhanseliweubhubhaneUkukhohlisa noma Ukwelaphaiqhinga noma ukwelashwa kukhanseliwe
UCurt ubelokhu engumuntu othanda ukwethuka selokhu weqa i-VHS ye- "Child's Play" ephuma egumbini labazali bakhe eneminyaka engu-8. Manje uthola ama-jollies akhe ezithombeni ezitholakele, ama-B horror flicks, namafilimu angakhonanga ukukhishwa kwetiyetha.
UJames Wan Revs Up 'Knight Rider' Reboot
Ukufa Okungachazeki Okusakhuthaza 'I-Nightmare ku-Elm Street'